Qaamuuska kumbuyuutarka (LMNO) | Ragga Stylish
LAN: Shabakada Aaga Deegaanka ama shabakada deegaanka: Waa shabakad xiriir isgaarsiineed xog xaddidan, tusaale ahaan, shirkad.
Maamulaha LAN: nidaamka qalliinka network.
Laptop: laptop ku saabsan cabirka faylalka.
Latency: Waqtiga loo baahan yahay baakadka macluumaadka si ay uga soo safraan isha illaa halka loo socdo. Latency iyo bandwidth ayaa si wada jir ah u qeexaya awooda iyo xawaaraha shabakad.
LCD: Muuqaalka Crystal Liquid. Soo bandhigida kareemada dareeraha ah, guud ahaan waxaa loo isticmaalaa buugaagta xusuusta iyo kumbuyuutarrada kale ee yaryar.
Luqadda barnaamijka: nidaamka qorista sifeynta saxda ah ee algorithms ama barnaamijyada kombiyuutarka.
LEXICON: Luuqad Hordhac ah oo Tiro ah oo lagu xisaabiyo Waxyaabaha isticmaala koodhadhka Isbaanishka ama luqado kale. Waxay faa'iido u leedahay baaritaanka algorithms iyo barashada horumarinta barnaamijyada kombiyuutarka.
Link: isku xirka Sawir ama qoraal iftiin leh, adoo hoosta ka xariiqay ama midab leh, kuna hogaaminaya qayb kale oo dukumiintiga ah ama bog kale.
Linux: Firir ka mid ah nidaamka qalliinka oo la mid ah Unix, in kasta oo nidaamka qalliinka ee isticmaala kernel badanaa lagu sheego magacaas.
LISP (LISt Processing): Luuqad gaar ah oo sirdoonka farsamada gacanta ah. Nooca asalka ah, Lisp 1, waxaa ikhtiraacay John McCarthy shirkadda MIT dabayaaqadii 50-meeyadii.
LPT: Terminalka Daabacaadda Khadadka. Xiriirka ka dhexeeya kombiyuutarka shakhsi ahaaneed iyo daabacaha ama qalab kale. Waa deked is barbar socota waana ka dheereeysaa dekedda taxanaha ah.
Macintosh: Qoyska kombiyuutarada ay sameeyeen Apple.
Khayaanada: wuxuu ka yimaadaa Software-ka xun. Barnaamij kasta, fayl, iwm waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay khayaano. waxyeelo u geysan kara kumbuyuutarka, oo saameyn ku yeelanaya xogtiisa ama waxqabadkeeda. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah dixirigoodu, wicitaannada, spyware, iyo xitaa spam.
Macroviruses: Waa virus aad u baahsan, oo inta badan ku dhaca dukumiintiyada Microsoft Word. Way ka xanaaq badan tahay burburka. Tusaale ahaan, waxay ka dhigaysaa barnaamijka inuu iska indhatiro amarrada ama uu geliyo ereyo ama weedho aanu isticmaaluhu qorin.
Mawduuc Qaab dhismeedka maamule. Kumbuyuutar nooc badan oo isticmaale ah, oo loo isticmaalo shirkadaha.
qamriga: barnaamij yar oo si otomaatig ah ugu qaybiya farriimaha emaylka adeegsadayaasha ku qoran liiska boostada.
megabit: Qiyaastii 1 milyan oo jajab. (1.048.576 xabo).
megabyte (MB): halbeegga cabbirka xusuusta. 1 megabyte = 1024 kilobyte = 1.048.576 bytes.
Megahertz (MHz): Hal milyan oo hertz ama hertz.
Khasnado: qadar yar oo ah xawaaraha xawaaraha sare ee kordhiya waxqabadka kumbuyuutarka iyadoo si ku meel gaar ah loo keydinayo xogta.
Xusuusta Flash: nooca xusuusta la tirtiri karo oo dib loogu habayn karo unugyada xusuusta ee loo yaqaan "blocks". Magaceeda waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in microchip-ka uu kuu ogolaanayo inaad ku masaxdo jajabka xusuusta hal talaabo, ama "flash". Waxaa loo isticmaalaa taleefannada gacanta, kaamirooyinka dhijitaalka ah, iyo aalado kale.
Microprocessor (microprocessor): waa qalabka ugu muhiimsan kumbuyuutarka. Waxay ka tirsan tahay qaybta wax soo saar ee dhexe ee mashiinka waxaana ka mid ah qeybaha ugu muhiimsan ee qaybta caqli galinta xisaabta. Waa midka mas'uulka ka ah fulinta barnaamijyada ku keydsan xusuusta RAM.
Millisecond: kun kun ilbidhiqsi
XIRFADAHA: Hawlgallada MIllion Labaad, Malaayiin hawlgal ilbidhiqsi, waa cabbir lagu cabbirayo waxqabadka barnaamijka.
Goobta muraayadaha: goobta muraayada. Websaydh ayaa loo guuriyey server kale si loogu fududeeyo helitaanka waxyaabaha ku jira meesha ugu dhow ama ugu habboon ee isticmaalaha.
MIT: Machadka Teknolojiyadda Massachusetts. Hay'ad sharaf leh oo Mareykan ah oo fadhigeedu yahay Boston. Kuwo badan ayaa u tixgeliya jaamacadda farsamada ugu fiican adduunka.
MMX (MultiMedia eXtension): Microprocessor Instruction set (iyo magacaabista processor-ka) Pentium taas oo ay Intel markii hore soo bandhigtay) oo loogu talagalay in lagu dedejiyo barnaamijyada multimedia.
Modem: modulator-demodulator. Qalabka durugsan ee kumbiyuutarka ku xira khadka taleefanka.
Motherboard: Guddi ka kooban wareegga aasaasiga ah ee kombiyuutarka, processor-ka, xusuusta RAM iyo boosaska aad ku ridi karto looxyo kale (network, audio, iwm).
MPEG: Kooxda Khabiirka Moving Mountains waxay horumariyaan heerarka fiidiyowga dijitaalka ah iyo cadaadiska maqalka. Waxaa kafaala qaadaya ISO. MPEG1 iyo MPEG2.
Shabakad: (shabakad) Shabakad kumbuyuutar waa nidaam isgaarsiineed xog oo isku xira nidaamyada kombiyuutarka ee ku yaal meelo kala duwan. Waxay ka koobnaan kartaa iskudhafyada kala duwan ee noocyada shabakadaha.
Kaadhka Wajahadda Shabakadda: Kaararka adabtarada ee ku dhex jira kombuyuutarrada tilmaamaya nooca shabakadda la adeegsan doono (Ethernet, FDDI, ATM) iyo in iyaga dhexdooda laga helo isku xirka isku xidhka kombiyuutarka iyo shabakadda. Taasi waa, fiilooyinka shabakadu waxay ku xirmaan kumbuyuutarka.
Nidaamka Howlgalka Shabakadda: Nidaam hawlgal oo ay ku jiraan barnaamijyo lagula xiriiro kombuyuutarrada kale shabakad iyo wadaagga kheyraadka. (Node: Qalab shabakada ku yaal, badanaa kombiyuutar ama daabacad).
Nanosecond: hal bilyan oo ilbiriqsi. Waa qiyaas caadi ah waqtiga helitaanka RAM.
Browser: barnaamijka loo maro World Wide Web. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa Netscape Navigator, Windows Internet Explorer, Opera, Safari ama Mozilla Firefox.
Heerka CDMA: Code didivison Multiple Access: Code Division Multiple Access. Heerka loogu talagalay gudbinta xogta iyada oo loo marayo taleefannada gacanta.
Heerka CDPD: Xogta Baakadka Dijital ah ee Gacanta: Baakadka Xogta Gacanta ee Dijital ah. Tiknoolajiyada u oggolaaneysa xogta in la gudbiyo iyo in lagu galo internetka iyada oo loo marayo shabakadaha gacanta ee hadda jira.
Heerka GSM: Nidaamka Caalamiga ah ee Isgaarsiinta Mobilada: Nidaamka Caalamiga ah ee Isgaarsiinta Mobilada. Nidaamka taleefanka dhijitaalka ah ee si ballaaran looga adeegsado Yurub.
Heerka TDMA: Waqtiga oo loo kala qaybsamo Soo-helid Badan: Waqti Qaybsi Helitaan Badan. Heerka loogu talagalay gudbinta xogta iyada oo loo marayo taleefannada gacanta.
Online: khadka tooska ah, ku xiran. Xaaladda kumbuyuutarka markii uu si toos ah ugu xirmayo shabakadda aaladda dhexdeeda, tusaale ahaan modem.
AMA HADDII (Iskuxidhka Nidaamyada Furan): Heerka guud ee hab maamuuska isgaarsiinta.
Output (soo saaridda xogta): Waxaa loola jeedaa macluumaadka uu adeegsadaha u arko in lagu soo saaray nidaam kombuyuutar. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa tixraac ahaan habka soo saarista macluumaadka. Waa macluumaadka ay soo saarto kumbuyuutarku sida caadiga ah iyada oo laga jawaabayo talooyinka uu bixiyo adeegsadaha, oo ah kicin / jawaab, ama gal / geedi socod / wax soo saar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Qaamuuska Kumbuyuutarka (LMNO)